50 Qodobbada Salaadda ee Loogu Talo Galay | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Uncategorized 50 Qodobbada Salaadda ee Loogu talagalay Guusha
50 Qodobbada Salaadda ee Loogu talagalay Guusha
Wacdiyuhu 10: 5-7:
5 Waxaa jira wax shar ah oo aan qorraxda hoosteeda ku arkay, waxaana weeye qalad taliyaha ka yimaada, 6 Nacasnimadu waxay joogtaa meelo sarsare oo waaweyn oo taajiriintuna waxay fadhiyaan meel hoose. Waxaan arkay addoommo fardo fuushan, iyo amiirro sida addoommo oo kale lugaynaya.
Sawirka lagu xardhay Qorniinka kor ku xusan waa xaalad ay maanta ku sugan yihiin Muuminiin badan. Tani waa wax shar ah qorraxda hoosteeda, in badan oo gaalada ah ayaa nolosha ka dhigaya, halkaasoo carruurta Ilaah ay ku nool yihiin gacan ka hadal. Furashadii darteed, Ilaah wuxuu diyaariyey waxkasta oo aan ubaahanahay si aan ugu guuleysano nolosha iyo adeega, Masiixu wuxuu inooga dhigay dhamaan wanaagyada nolosha iyo cibaadada oo aan wada heli karno, laakiin waxyaalahan wanaagsan kaliya nama imaan doonaan, waa inaan qaadanaa iimaan ilaahay waa ruux, waxkasta oo uu bixiyaana waxay ka yimaadaan xaga ruuxa, markaa waa inaan ku aqbalnaa rumaysad. Maanta waxaan u soo ururiyey 50 bar salaadood soo kabasho si ay kuu suurto galiso inaad caqiidadaada ku dhaqan gasho. Si aad u aragto waxyaabo noloshaada wax u taraysa waxaad u baahan tahay dagaalka iimaanka.
Si aad ugu raaxeysato guul, waa inaad aad u tukataa boqortooyada Ilaah, kaliya rabshaduhu waxay ku qaadanayaan xoog Matayos 11:12, haddii aad rabto inaad aragto wax guul ah oo noloshaada ah, ka dib u qaad qodobbada salaaddaan ee guusha si dhab ah. Waxaan kuu arkaa inaad jebinayso dhammaan qaybaha noloshaada maanta magaca Ciise.
1.Waxaan farayaa wixii aan caadi ahayn ee noloshayda ah in la joojiyo magaca Ciise.
2. Dhiiggaaga nadiifinta ah, ku maydh oo ku nadiifi wasakh kasta oo tuubbigayga ruuxiga ah.
3. Buur kasta oo madax adag noloshayda, waxaa lagaa saarayaa magaca Ciise.
4. Waxaan amar ku siinayaa xoog kasta oo igu cadaadiya in la iiga dhigo, magaca Ciise.
5. Waxaan amar ku siinayaa caqabad kasta oo timaaddayda in laga qaado, magaca Ciise.
6. Waxaan amar ku bixinayaa in la kala furfuro nolosheyda ruuxiga ah ee cadawgu igu dhibayo in laygu xiro magaca Ciise.
7. Aabbe, gacantaada xoogga badan, ku dayactir wax kasta oo sheydaanku ku waxyeeleeyay noloshayda magaca Ciise.
8. Waxaan cadeynayaa inaan ku guuleysan doono nolosha mana jiro shaydaan ku joojin kara magaca ciise.
9. Waxaan isku daboolayaa dhiiga ciise, magaca Ciise.
10. Waxaan qirayaa in noloshayda ay ka buuxsami doonto maragfurka halista ah magaca Ciise.
11. Xadhig kasta oo shar ah iyo silsilad kasta oo xun oo qalqallooc ah ayaa ilahay u gudbiya, magaca Ciise.
12. Waxaan ku canaantaa ruux walba oo dhego beel iyo indho la’aan ah nolosheyda, magaca Ciise.
13. Waxaan ku xiraa ninka xoogga leh gadaashayda horumarkayga waxaanan curyaamiyaa howlihiisa noloshayda, magaca Ciise.
14. Waxaan indhahayga iyo dhegahayga ku mariyey dhiigga Ciise.
15. Sayidow, dib u soo celi indhahayga iyo dhegahayga, magaca Ciise.
16. Sayidow, indhahayga iyo dhegahayga u subag si ay wax kuugu arkaan oo ay magacaaga wax kuugu maqlaan
17. Waan tirtirayaa wixii shaydaan ah ee Shaydaanka ah, anigoo ka hor istaagaya waxayaga ku dhaca magaca Ciise.
18. Indhaha iyo dhegaha ruuxiga ah, waxaan kugu amrayaa magaca Ciise, fur.
19. Magaca Ciise, waxaan gacanta ku qabtaa awood kasta oo gadaal ka noqota nooc kasta oo dib u dhac ah nolosheyda dhexdeeda oo ah magaca Ciise
20. Waxaan cadeynayaa inaan maskaxda ku hayo, sidaa darteed nolosha ayaan ku guuleysan doonaa magaca Ciise
21. Waan diidanahay ruuxa faqiirka ah magaca Ciise
22. Waan diidanahay ruuxa dhexdhexaadnimada magaca Ciise
23. Waan diidanahay ruuxa ku dhacay magaca Ciise
24. Waan diidanahay ruuxa gadaal ka taagan magaca Ciise
25. Waan diidanahay ruuxa caajisnimo magaca Ciise
26. Waan diidanahay ruuxa ku soo dhowaada cilladaha magaca Ciise
27. Waan diidanahay ruuxa daahitaanka ee ku dhaca magaca Ciise
28. Waan diidanahay ruuxa liita oo waxaan ku doonayaa magaca Ciise
29. Waan diidanahay ruuxa kor iyo hoosba magaca Ciise
30. Waan diidanahay ruuxa nasiibka iyo nasiibka adag ku bixiyay magaca Ciise.
31. Waxaan cadeynayaa inaan maskaxda ku hayo, sidaa darteed nolosha ayaan ku fiicnaan doonaa magaca Ciise
32. Waxaan cadeynayaa in aan ku guuleysanayo nolosheyda magaca Ciise
33. Waxaan cadeynayaa in meelkasta oo aan joogo, waxaan kor ugu soo baxayaa magaca Ciise.
34. Waxaan cadeynayaa in aan boodhka ka soo kici doono ciida dhexdeeda oo lawareegayo magaca ciise
35. Waxaan noqon karaa qof kale hadda, laakiin waqti aad u fog Ilaahay ma iga yeel doono caanka adduunka magaca Ciise
36. Waxaan cadeynayaa in aan weligey madax noqon doono ee uusan noqon doonin dabada nolosha
37. Ruuxa xigmadda ayaa ka shaqeeya aniga oo ku shaqeeya magaca Ciise
38. Ruuxa waxgarashada ayaa igaga dhex shaqeeya magaca Ciise
39. Ruuxii dhiirrigelinta ayaa igaga dhex shaqeeyey magaca ciise
40. Ruuxii is-hoosaysiinta ayaa ka dhex shaqeynayay magaca Ciise.
41. Waxaan taaganahay derbi walba oo Yerixoo dhex yaal oo aniga iyo aniga igu dhex jira magacayga ciise.
42. Waxaan ka adkaaday dhamaan xoog iska caabinta la dagaallama aniga iyo magaca Ciise
43. Waxaan amar ku bixinayaa in belaayo weligeed ah lagu soo dejiyo nin kasta oo shar leh ama naag kasta oo la dagaallama waxayadayda
44. xoogga Ilaah, waxaan ku kala firdhiyaa shirqool kasta oo jahannamo oo ku lid ah nolosheyda magaca Ciise
45. Awoodaha Ruuxa Quduuska ah, waxaan baabi'iyaa sixir kasta oo been abuurka ah oo ku dhaca magaca Ciise.
46. ​​Cadaawe kasta oo qarsoon oo la dagaallama waxayaabaha igu dhaca, waxaan kuu sheegayaa waana ku caayayaa magaca Ciise weligiis.
47. Qof kasta oo ilaaliya ruux kasta oo ilaalinaya waxayadayda, indhoolayaal imminka magaca Ciise
48. Gacanta Ilaahay ha i jabiso laf dhabarta xoog kasta oo shar leh oo jidkayga ku gala magaca Ciise.
49. Waxaan ku soo laabanayaa dirayaha, hadalkasta oo shar ah oo ka dhan ah noloshayda iyo himiladaada magaca Ciise.
50. Aabe waad ku mahadsantahay ka jawaabida ducadayda kujirta magaca ciise.
article Previous100 Dhibcood oo Salaada ah si looga gudbo tijaabooyinka iyo dhibaatooyinka
Next article70 Dhibcood oo Salaadda loogu talagalay Jannada Furan
Qodobbada Salaadda ee ka dhanka ah Weerarka
7 maalmood Soonka iyo Salaadda Guusha ee Natiijooyinka Imtixaanka
30 Tilmaamaha salaadda ee dib loogu soo celinayo ammaanta lumay